Qaybta Barashada Af-Ingiriiska
Qaybta Bartayaasha Luuqada Ingiriiska-ELL Home > Soomaali > Qaybta Bartayaasha Luuqada Ingiriiska-ELL
Waaxda loo yaqaan ENGLISH LANGUAGE LEARNER (ELL) waxay bixisaa barnaamjyo loogu talogaley ardayda aan u dhalan af-ingiriiska, si ay dhakhso ugu bartaan afka ingiriiska. Barnaamijyadan waxey ka baxaan dugsi kasta. Ujeeddadu waa in ardayda Af-Ingiriiska bilowga ku ah ay si dhakhso leh u bartaa Af-Ingiriiska.
Haddii aad u baahantahey akhbaar dheeraad ah, fadlan la xiriir waaxda English Language Learners (ELL) 651-767-8320.
Adeegyadan waxay ka jiraan iskuulada oo dhan. Intaa waxaa dheer, SPPS waxay bixisaa noocyo kala duwan oo ah barnaamijyada ESL-ka loona qorsheeyey ardayda ku cusub dalka yo ardada ku hadasha afka spaanishka. Barnaamijyadan oo faahfaahsan hoos ka akhri:
Barnaamijkan waxaa loogu tala galay ardayda dalka ku cusub ee ku jirta fasalada 1-6 kuwaasoo ku hadla Ingiriis aan badneyn. Fasalka kasta oo ka tirsan Language Academy waxaa wada dhigta arday ku jirta ELL-ka iyo kuwo afkooda hooyo uu yahay Ingiriiska. Ardayda ELL-ka waxa ka shaqeeyaan casharada la mid ah kuwa ardayda kale ee ay isku fasalka yihiin qaataan, iyagoo kaalmo ka helaya macalimiinta ELL-ka iyo kalkaaliyayaasha macalimiinta ee labada luuqadood ku hadla.
Latino Consent Decree:
Barnaamijka Latino Consent Decree ee Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul waxaa loogu tala galay ardayda ku hadasha Af-Isbaanishka oo u baahan kaalmo waxbarasho dheeraad ah. Ardayda LCD waxaa wax lagu baraa Af-Ingiriisi iyadoo Af-Isbaanishkana lagu kaalmeeyo Haddii loo baahdo si oo hubiyo in ardydu leedahay xirfado aasaasi ah iyo aqoonta loogu baahan yahay qalinjebinta. Ardayda LCD waxay kale oo wax ka bartaan dhaqankooda iyo taariikhda laatiinaha.
Barnaamijkani wuxuu bixiyaa taageero ku aadan dhammaan qeybaha kala duwan ee waxbarashada iyo tacliinta ku saabsan arrimaha bulshada si gaar ah. Barnaamijkaan waxaa loo qorsheeyey ardeyda dhigata fasallada 7-12. Barnaamijkan wuxuu u fududeeyaa ardayda ku cusub wadanka inay la qabsadaan bulshada iyagoo ku dadaalaya inay qalin-jebiyaan. Ardaydaan waxay 75% maalin kasta geliyaan barashada afka ingiriiska iyagoo dadaal dheeraad ahna gelinaya barashada maadooyinka kale sida, juquraafi , caafi maad saaynis iyo xisaab. International Academy-LEAP (IA-LEAP):
Mac-hadka caalamiga ah ee LEAP waa dugsi sare oo loogu talagalay ardayda cusub ee luuqada Ingiriisiga barata ee dhawaan wadanka timid oo da’doodu u dhaxayso 14-21 sano. Ardaydu waxay qaataan fasalo isugu jira luuqada Ingiriiska iyo maadooyinka kale si ay u wanaajiyaan heerka luuqadooda Ingiriisiga, shahaado dugsi sarana u qaataan. Iyadoo barista Ingiriisigu tahay halka diirada ugu wayn lagu hayo ee IA-LEAP diirada saarayso hadan waxay aradaya iyo waalidiintaba loo hayaa dad luuqadooda ku hadla waana lagu kaalmaynayaa afkooda Hooyo.